Hlola iTangier, Morocco - World Tourism Portal
Hlola i-Tangier, Mororce
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili eTangier, Morocco.
Yini okufanele uyenze eTangier, eMorocco
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeTangier
Bukela ividiyo ekhuluma ngeTangier
Hlola iTangier idolobha eliyitheku elibalulekile kulo Morocco.
ITangier yidolobha laseMoroccan elikhangayo ukuvakasha. Inezinto eziningi ezithandwa yizihambi — umuzwa oyimfihlakalo eyingqayizivele, umlando othokozisayo, amabhishi amahle, amabhishi angahloliwe iTangier ingxube engalawulwa yaseNyakatho Afrika, Spain, Portugal kanye France. Itholakala enyakatho Morocco, futhi yayingaphansi kolawulo oluhlangene lwamazwe ngamazwe kuze kube yi-1956. ITangier ihlukaniswe eSpain yi-20 amamayela we-Strait of Gibraltar.
Izikebhe ezivame ukwenziwa zenza ukuwela okufushane ukusuka eYurophu usuku nosuku, futhi imikhumbi eminingi yokuhamba ngomkhumbi ihamba phakathi kweMedithera ne-Atlantic ivame ukufaka iTangier njengechweba lokushayela.
Isikhumulo sezindiza i-Tangier-Ibn Batouta sitholakala kwi-12 km ukusuka edolobheni.
Ukungena ngendiza kuyindlela elula futhi engahambi kahle yokuza eTangier: awekho ama-tick esikhumulweni sezindiza futhi amanani entengo amatekisi ahlelwe nguhulumeni. Qaphela imigqa emide kulawulo lwamaphasiphothi ngaphambi kwendiza eya endaweni yase Schengen.
Thatha uhambo olulula olwandle (i-Ave Mohamed VI) ukujabulela lokho okwedolobha.
I-Tomb of Ibn Battouta, isihambi esidumile se-14th century ezalelwa eTangier. Khokha intela kumhambi ohamba naye.
Teatro Cervantes, rue Salah Eddine et Ayoubi. Kuvaliwe futhi kwawa izicucu kodwa thatha isithombe siphume ngaphandle kwamasango njengoba udlula lapho usendleleni ekhuphukela e-Grand Socco.
I-American Legation, 8, iRue America. ITangier American Legation Museum (TALM), isikhungo esikhulayo samasiko, imnyuziyamu, isikhungo senkomfa nomtapo wezincwadi enhliziyweni ye-medina yakudala eTangier, igcinwe endaweni eyingqophamlando yaseMelika eyatholakala phesheya kwezilwandle. Imnyuziyamu ikhombisa iqoqo elikhulu lobuciko nezinto zomlando. Iphinde ibe noPaul Bowles Wing ozinikele kumlobi kanye nomqambi owayephila impilo yakhe ende yabantu abadala eTangier.
Musée d'Art Contemporain de la Ville de Tanger. Kuvaliwe kuze kuphinde kubonwe eminye imininingwane.
IMyuziyam yaseKasbah, isigodlo sangaphambili saseSultan, ayifanelwe ukuba ibonwe hhayi kuphela ngokuqoqwa kwayo kwemidwebo yobuciko kusuka kuFenike kuya ezikhathini zanamuhla, kepha nesakhiwo nengadi. Kunemali encane yokungena kanye nezikhathi ezihlukile zokuvula ebusika nasehlobo.
Abantu ababukele eTerrasse des Paresseux, boulevard Pasteur noma ngeSonto eceleni komgwaqo u-Avenue Mohammed VI.
Phuza itiye le-mint ku-Café Hafa futhi ujabulele ukubukwa kolwandle.
I-Mnar Park Aquatic Park ngokubuka okukhulu kogu. Vula ku-2005 inezilayidi ze-aqua, amasekethe okukhishwa, ikhefi, indawo yokudlela yothando. (Ama-pancake amahle!).
Thola ukulahleka ngenjabulo ku-medina, esebenza kakhulu kusihlwa nasebusuku.
Vakashela eMnyuziyamu we-American legation edolobheni elibiyelwe ngodonga. (IMorocco yaba izwe lokuqala ukuqaphela iMelika, ngoDisemba 1777 ngethemba lokuqhakambisa ukuhweba nephabhulikhi entsha. Lesi senzo esenziwe ngumhlonishwa waseMorocian kwakuwukuqashelwa komphakathi okokuqala kwe-US yinhloko yezwe.)
Iya kusihlwa ngoLwesine noma ngeSonto ekuseni ukubona abesifazane basezintabeni zaseJbala begqoke izingubo zabo ezimibalabala bedayisa imikhiqizo yabo nemikhiqizo yobisi odongeni lweSonto le-St Andrew's (iSonto lesiNgisi).
Vakashela i-Casa Barata. Ungathatha itekisi elikhulu okwabiwe ngalo esiteshini esiseduze kwe-English Church. Imizuzu nje ye-5. Yimakethe enkulu ethengisa yonke into. Awusoze wazi ukuthi uzothola ini lapho.
Vakashela iHercules Cave (Grottes d'Hercules). Imihume yaseHercules, ebekwe nje i-14kms entshonalanga neTangiers, iyindawo yobuhle bemvelo obumangalisayo nokubaluleka okukhulu kokudala. Ngokusobala, kulapho umlingiswa wasenganekwaneni, uHercules, wayevame ukuphumula khona ngemuva kokuqedela umsebenzi wakhe we-12. Umhume futhi ufana nesithombe sesibuko esifana nezwekazi lase-Afrika. Ukufika lapho kuthatha imizuzu eyi-15. Umhume ungaphakathi kwekhilomitha yolwandle olunesihlabathi esihle (i-Plage Achkar), enhle yokushiswa yilanga noma ukubhukuda. Thenga isinkwa nezithelo ngaphambi kokuba uhambe, upakishe epikinikini, wenze usuku lwakho.
Umsebenzi omningi wethusi wenziwa kwamanye amadolobha kepha uyatholakala lapha. Izimpahla zesikhumba ziyatholakala. Hlala kude nezicupho zezivakashi futhi ungahle uthole intengo evumelana nayo. Kukhona imakethe edumile eTangier ebizwa nge- “casa barata” (indlu yezinto ezishibhile) - kunezimali okufanele zibekhona lapha kodwa qaphela izinto ezenziwa ngobuqili nezimpahla ezebiwe (lezi zithengiswa eceleni kwemifino, ugesi, izembatho, izicathulo, izinongo, amakhaphethi, amandla esimbi nakho konke okunye umuntu angacabanga ngakho!). Kukhona ezinye izimakethe ikakhulukazi i-souk e-medina (ikakhulukazi imifino, izingubo nezinto zabavakashi) naseBen Mekada (imifino). Lesi sakamuva asizihlanganisi izivakashi nhlobo futhi saziwa njengenye yezindawo ezibucayi zeTangier futhi emuva kuma1980 bekukhona izidubedube zezinkwa lapha.
Izikhumba ezinemibala enesikhumba ezinamazinyo akhombe yizipho ezinhle ongazithatha ekhaya. Uma ukwazi ukuxoxa, ikakhulukazi nge-Arabhu ethile, ungathola izicathulo ezifanayo ezishibhile. Ukugqoka kwabesilisa nabesifazane kungabizwa ngamanani anengqondo nawo, e-medina.
Kunokhetho oluningi lokudla okuhlukahlukene okutholakalayo. Amahhotela amaningi okunethezeka anikeza ukukhetha okuhle kweMoroccan ne-Continental Fare, noma ngamanani aphakeme kakhulu kunalokho ozokuthola kwenye indawo. Kukhona nezindawo zokudlela eziningi eduze kwe-Ave Mohamed VI (ngasogwini lolwandle) lapho umuntu angathola khona isidlo esimnandi ngengilazi ye wayini ebhishi lolwandle.
Kusihlwa, iya eplaza eseduze kwesiteshi sebhasi se-CTM. Kukhona amathofi amaningi nezindawo zokudlela ezibhekene neplaza. Intengo nezinsizakalo zinhle ngenxa yomncintiswano obukhali. Ukuzulazula nje e-medina kuzokulethela izindawo zokudlela eziningi zaseMoroccan ezinikeza izitsha ezifanayo, ikhwalithi, kanye namanani (isidlo esikhulu esiseduzane nama-7 amadola), ngakho-ke ungavele ukhethe eyodwa ngokungahleliwe futhi mhlawumbe weneliseke.
Kukhona nezinye izindawo zokudlela zasolwandle ezisanda kufakwa esikebheni zabantu bendawo ethekwini. Uma ukhuluma isiFulentshi / isi-Arabhu futhi unomqondo we-adventure kunconywa kakhulu. Zonke izihlalo ezingaphandle futhi ezilungiselelwe umfokazi kuphela! Awekho amamenyu noma amanani kodwa ashibhile ngokumangazayo futhi ayiqiniso. Ipuleti enkulu yamaphaza, inhlekelele kanye nenhlanzi eyanele ukondla ibutho elincane.
Ungahle uthwale ngokushesha ama-tagines futhi ukudla komgwaqo kuyindlela enhle yokuhlwitha usuku lonke. Izingxube ze-yogurt zingadala ikakhulukazi, njenge-avocado nama-alimondi, noma ukuxubaniswa kwezithelo. Izitolo ezincanyana kusouk zithengisa imifino ephekiwe enjengesitshalo seqanda, nelayisi, nokunye ukudla okumnandi nokudla. Kusihlwa ekuseni ungathola izigcawu zamakhekhe we-chickpea afafazwe ngosawoti kanye ne-paprika.
Ekuseni i-cafe "yasendaweni" izokunikeza i-cafe au lait. (Amakhekhe lapho izivakashi zihlangana khona zizokukhokhisa kabili). Imvamisa kuba nomthengisi wesinkwa e-cafe (ethekwini noma kumadina) ozokunika isinkwa ngoshizi noju. Kulungile ukuthenga isinkwa / ibhulakufesi yakho kwenye indawo bese uyidla ngaphandle endaweni yokudlela. Uma umgadli wesinkwa eseduze kwe-cafe, isilinda sivame ukuqoqa.
Kukhona izindawo eziningi eTangier zokuphuza - abantu banezifiso zabo abazithandayo. Okuningi kuncike kumnikazi wamanje ovame ukunika indawo leyo ambiance ethile.
Ungase ukhethe ikhofi esikhundleni salokho - akukho ukushoda kwamakhofi; ezinye zazo ezihamba phambili ezweni. Abanye banokubukwa okumangazayo, abanye ikhofi enhle, abanye bayathandwa, abanye ngomculo, abanye banamaqebelengwane amnandi, abanye bayizindawo zokuphumula ngemuva kokuthenga kosuku olunzima, kanti abanye bamane nje bangabazi - ukukhetha kungokwakho.
Amajusi ezithelo amasha athengiswa ngabathengisi basemgwaqweni phakathi nezinyanga zasehlobo. Amakhofi nawo akhonza ama-juices amasha futhi ajwayele ukuba nalokho okubizwa ngokuthi i-panache - ukuhlanganiswa kwamajusi wezithelo ngokuvamile nobisi, i-apula ne-almond - kuzame - kumnandi.
Ungathenga amathikithi wesitimela, amabhasi nezikebhe eziteshini nasemachwebeni, yize ungakuthola kulula ukuthenga amathikithi esikebhe kubasebenzi bokuvakasha kunokuba ubhekane nengwadla ethekwini. Uma uhlela ukuhamba ngesikebhe, kubalulekile ukuqaphela ukuthi okuyela e-Algeciras kwesinye isikhathi akusilandeli isikhathi esibekiwe, futhi izikhathi zokusuka zingashintsha ngisho nangosuku losuku lokuthenga amathikithi. Enye indlela ukuthatha isikebhe esisheshayo esiya eTarifa, ngoba kungenzeka ukuthi zigijime ngesikhathi futhi okungenani enye yezinkampani inikezela ngebhasi lamahhala ethekwini e-Algeciras. Ungase futhi uhlabe umkhosi wamatekisi amakhulu eziteshini ezinkulu zamabhasi nasembobeni yezikebhe.